EX - ABSDF: ပညာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်းနှစ်သွယ်
April 18, 2013 at 10:51am
လူတဦးတယောက်ရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ ပညာသင်ယူနိုင်မှုအရည်အချင်းတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာ သက်ဆိုင်သူ အသုံးပြုတဲ့ပညာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်းကိုကြည့်ရှုအကဲဖြတ်နိုင်တယ်လို့ပညာသင်ကြားရေးနဲ့သင်ယူရေးသုတေသန နယ်ပယ်က ပညာရှင်တွေကအဆိုပြုထားခဲ့ကြပါတယ်။ပညာရပ်တခုကို လေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာလူတယောက်ဟာ ဒီပညာရပ်ကိုအပေါ်ယံ လေ့လာသင်ယူခြင်းနည်းလမ်း (Surface approach to learning) ကိုအသုံးပြုသလား၊ နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်း(Deep approach to learning) ကိုအသုံးပြုသလားဆိုတာကို သိရင်ဒီလူရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့အရည်အချင်းကို လေ့လာအကဲဖြတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
ပညာရပ်တခုကိုလေ့လာတဲ့အခါ အပေါ်ယံလေ့လာသင်ယူခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုတတ်သူများဟာအဓိကအားဖြင့် စာမေးပွဲအောင်ရေး၊ဘွဲ့လက်မှတ်ရရှိရေး၊ပညာရပ်တပိုင်းတစကို ရေတိုမှာလိုသလို ဆွဲသုံးနိုင်ရေးစတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိသူများဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အလုပ်တခုကိုရေဆုံးရေဖျား ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သူများ မဟုတ်ပဲ၊ရေသာခို လှေကြုံစီးတတ်သူများဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက်လေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုတာအလွတ်မှတ်မိခြင်းနဲ့မှတ်ထားတာတွေကို မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ပြန်ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ယံလေ့လာသင်ယူတတ်သူများရဲ့လေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုင်ရာဗျူဟာတွေကတော့ လေ့လာရမယ့်စာအုပ်စာပေထဲက ကောင်းနိုးရာရာအချက်အလက်တွေကို စွဲထုတ်ပြီး၊အလွတ်မှတ်မိနေအောင်ကျက်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာနေတဲ့ ပညာရပ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နားလည်အောင် ပြုလုပ်လေ့မရှိပါဘူး။အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းကိုပဲပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာသဘောတရားတွေကို ဆက်စပ်တွေးခေါ်ခြင်းမရှိပဲ၊ ဦးနှောက်ထဲမှာပညာတွေ ကျန်ဖို့ထက်စာမေးပွဲအဖြေလွှာပေါ်မှာရေးချလိုက်နိုင်ဖို့ကိုသာအာရုံစိုက်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
ပညာရေးဆိုင်ရာလေ့လာသူ Entwistleနဲ့Martonတို့ကတော့ပညာလေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုတာအလွတ်မှတ်မိခြင်းလို့ရှုမြင်တတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာပညာရပ်တွေကို အပေါ်ယံပဲလေ့လာတတ်လေ့ရှိတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ကို နက်နက်နဲနဲသိနားလည်ခြင်း မရှိကြဘူးလို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
အပေါ်ယံလေ့လာသင်ယူတတ်သူများဟာပညာရပ်ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကိုလေ့လာတာထက် စာမေးပွဲမှာပါနိုင်မယ့် မေးခွန်းတွေမှာအဖြေဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာကိုပဲကြိုပြီး တွေးလေ့ရှိကြပါတယ်။စာမေးပွဲနဲ့ အခြား စစ်ဆေးချက်တွေမှာကျရှုံးမှာကို အလွန်ပဲစိုးရိမ်ပူပန်တတ်ကြပါတယ်။ပညာလေ့လာသင်ယူနေချိန်တွေမှာလဲပျင်းရိခြင်းတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာသင်ယူခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့ ပညာလေ့လာသင်ယူသူများကတော့ပညာရပ်တခုကို လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့စာမေးပွဲတွေ အောင်ဖို့နဲ့ရေတိုအသုံးချနိုင်ရေးကိုပဲအာရုံထားလေ့ မရှိကြပါဘူး။ဒီပညာရပ်ကို အသေးစိတ်၊နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်အောင် ကြိုးပမ်းလေ့လာကြပါတယ်။ဒီပညာကို အသုံးပြုပြီးလက်တွေ့မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ပြဿနာတွေကိုအဖြေရှာနိုင်ဖို့ဆက်စပ်တွေးတောလေ့ရှိကြပါတယ်။ပညာသင်ယူခြင်းအပေါ်မှာပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်း မရှိပဲပညာရပ်တွေကို တဆင့်ချင်းစနစ်တကျ လေ့လာသင်ယူကြပါတယ်။ဖြတ်လမ်းလိုက်လေ့ မရှိကြပါဘူး။
ပညာလေ့လာသင်ယူခြင်းမှာဖြတ်လမ်းလိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးဟာ မိမိကိုယ်တိုင်ကိုသာမကအများကိုပါ ဒုက္ခရောက်စေတတ်ပါတယ်။ဥပမာ-နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုindicatorsတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီး Multivariate analysis လုပ်တယ်ဆိုပါစို့။ ပညာလေ့လာသင်ယူမှုမှာဖြတ်လမ်းလိုက်တတ်သူဟာဒီလိုဆန်းစစ်ချက်စာတမ်းတချို့ကို ဖတ်မှတ်၊ အရေးပါတဲ့အချက်တွေကို ဆွဲနှုတ်ပြီး၊ဒီအကြောင်းကို သိသယောင်ယောင်နဲ့တတ်ယောင်ကား လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီလိုလေ့လာဆန်းစစ်ချက်လုပ်နိုင်မယ့်အခြေခံသဘောတရားတွေဖြစ်တဲ့ variable approximations, dimension reductions, linear combinations for separation, Higher-dimensional approximations, allocation rules,misclassification စတာတွေကိုသဘောမပေါက်တဲ့ အခါကျတော့လက်တွေ့ပြုလုပ်ရတဲ့ အခါမှာကိုးရို့ကိုးယားတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊၀ိဇ္ဇာ ပညာရပ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်အခြေခံသဘောတရားတွေကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုမရှိပဲဖြတ်လမ်းလိုက် ဆရာလုပ်လိုသူတွေများလာတဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်နယ်ပယ်မှာသာမက၊ပညာရပ်နဲ့ လက်တွေ့ဆက်စပ်နေတဲ့အသုံးချမှု နယ်ပယ်တွေမှာပါကသောင်းကနင်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဖြတ်လမ်းလိုက်ခြင်းဟာလူတဦးတည်းအတွက်သာမကအများပြည်သူကိုပါ ဒုက္ခရောက်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်းကိုပညာလေ့လာသူအများက အသုံးပြုကြဖို့အလွန်ပဲ အရေးကြီးလှပါတယ်။
နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာသင်ယူခြင်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်တရပ်ဖြစ်တဲ့higher-orderthinking (အတွေးအခေါ်အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှု)ကိုလဲထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။အတွေးအခေါ် အဆင့်အတန်းမြင့်မားသူတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ အိုင်ဒီယာတွေကိုအစဉ်အလာ ဓလေ့ထုံးစံကြောင့်ဆိုပြီးတော့လဲ လက်ခံလေ့မရှိပါဘူး။ဘယ်သူပြောတဲ့ အဆိုအမိန့်စကားဆိုပြီးတော့လဲ မျက်စိမှိတ်ယုံကြည်လေ့မရှိပါဘူး။ အိုင်ဒီယာသဘောတရားတွေကိုစနစ်တကျလေ့လာပြီးမှလက်ခံကျင့်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။လက်တွေ့နယ်ပယ်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိပြန်လှန်သုံးသပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ပြဿနာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကိုရှာဖွေပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားလေ့ရှိကြပါတယ်။အတွေးအခေါ်သစ်တွေကိုကြံဆရှာဖွေလေ့ရှိကြပါတယ်။ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း (Criticalthinking) ကိုကျင့်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရရင်နက်ရှိုင်းစွာ သင်ယူလေ့လာခြင်းကိုအသုံးပြုသူတွေရဲ့ အရည်အချင်းဟာအပေါ်ယံသင်ယူလေ့လာခြင်းကိုအသုံးပြုသူတွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေထက်ရေရှည်မှာ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်တတ်တာကြောင့်နက်ရှိုင်းစွာ သင်ယူလေ့လာသူတွေများပြားတဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်းဟာအာဂုံဆောင် အလွတ်ကျက်ပြီးအပေါ်ယံသင်ယူလေ့လာသူတွေများပြားတဲ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းထက်ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လေ့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် ပညာသင်ယူခြင်းနည်းလမ်းနှစ်သွယ် ခွဲခြားမှုကို အသုံးပြုပြီး လူတဦးချင်းစီရဲ့အရည်အချင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်နိုင်ရုံမက၊လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အနာဂတ်ကိုပါခန့်မှန်းတွက်ချက်လို့ရနိုင်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
"ပညာရပ်များကိုနက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာသင်ယူခြင်းမှသည်တိုးတက်သော လူ့ဘောင်ဆီသို့"
Entwistle, N. J. andMaton, F. (1984) 'Changing Concepts of Learning', in Marton, F.,Hounsell, D. and Entwistle, N. J. (eds) The Experience of Learning,Edinburgh, Scottish Academic Press
Marton, Saljo (1976)'On Qualitative Differences in Learning I: Outcomes and Processes',British Journal of Educational Psychology, 45, 4-11.
Marton, Saljo (1976)'On Qualitative Differences in Learning II: Outcome asafunction ofthe learner's conception of the risk', British Journal of EducationalPsychology, 46, 115-117.
Posted by lu bo at 11:08 AM